Ogaden News Agency (ONA) – Wasiirka Arimaha Dibada Wayaanaha oo Diplomasiyiin Been Kawaraabiyay.
Wasiirka Arimaha Dibada Wayaanaha oo Diplomasiyiin Been Kawaraabiyay.
Posted by Dulmane	/ November 9, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya kala shaki iyo madmadow soo kala dhex galay siyaasiyiinta shisheeye ee Itoobiya kusugan iyo xukuumada wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa natiijo la’aan kudhamaaday shir magaalada Addis Ababa uga socday wasaarada arimaha dibada Itoobiya iyo siyaasiyiinta shisheeye ee magaalada Addis Ababa kusugan.
Shirka oo ay ujeedadiisu ahayd kala warqaadasho iyo in ay siyaasiyiintu ogaadaan xaalada dhabta ah ee wadanku uukusugan yahay ayaa isfahanwaa kudhamaaday kadib markii wasiirka arimaha dibada ee Itoobiya uu siyaasiyiinta usoo bandhigay warbixin aan lagasoo baaraan dagin oo been iyo borobagaandho laga soobuuxiyay.
Wasiir kusheega arimaha dibada ee wayaanaha ayaa siyaasiyiinta shisheeye usheegay in ay gabi ahaanba kasoo gudbeen marxaladii kacdoonada iyo qasku uu jiray, wuxuuna wasiir kusheegu sheegay in wadanku uu hada cagta saaray wadadii hormarka iyo cadaalada.
Wasiir kusheega arimaha dibada ee xukuumada wayaanaha ayaa sidoo kale sheegay in dhaqaalaha wadanku uu marayo meel lagu naaloon karo isagoo xusay in mardhaw uu wadanku gaadhi doono isku filaansho waa sida uu hadalka udhigay e.
Siyaasiyiinta shisheeye oo iyagu ah dad aad ula socda xaalada wadanka ayaa wasiirka usheegay in uu siiyay xog kadahsoon iyaga isla markaana aysan ufadhiyin, waxayna siyaasiyiintu goobta iskaga dareereen iyagoo siwayn ugu qoslay hadalka wasiir kusheegay.
Siyaasiyiinta ayaa dhankooda soojeediyay talooyin dhowr ah iyagoo xusay in uu wadanku ubaahan yahay siyaasad ufan iyo cadaalad.